Idolobha elihle lase-Albuquerque Casita - I-Airbnb
Idolobha elihle lase-Albuquerque Casita
I-adobe casita enhle edolobheni elinempilo i-Albuquerque. Ukujikijelwa kwetshe nje ukusuka enkabeni yedolobha, le ndawo ilungele okuhlangenwe nakho kwedolobha lase-Albuquerque. Hamba ngebhayisikili uye kwezinye zezindawo zethu ezimangalisayo zotshwala nezindawo zokudlela, thatha uhambo oluhle lokuphumula ugudle i-Rio Grande e-Bosque, udlulele e-ABQ BioPark kanye ne-Aquarium noma uvakashele ezinye izindawo eziningi ezikhangayo zasendaweni konke okuphakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo.
Le casita isanda kulungiswa kabusha futhi iza nendawo yokupaka egalaji yangasese, ikhishi eligcwele ama-countertops we-granite, isevisi ye-inthanethi + i-smart TV w/ eyakhiwe e-Amazon Fire-stick, igumbi lokugezela w/ishawa kanye nomoya oqandisiwe. Futhi inendawo encane yangasese yangasese elungele ukujabulela ikhofi lakho lasekuseni ngaphansi kwalokho kukhanya kwelanga okumangalisayo kwe-New Mexico noma ukuphumula phakathi kusihlwa ngenkathi ujabulela iziphuzo zakho ozithandayo.
4.90 · 62 okushiwo abanye
Lesi sakhiwo sitholakala emabhuloki ambalwa ukusuka enkabeni yedolobha. Yindawo ekahle yokuphuma edolobheni kanye nokuthatha uhambo olufushane lwe-Uber/Lyft oluya eNyuvesi nasezindaweni zaseNob Hill.
Futhi, uma uzobe usedolobheni ukuze uthole i-balloon fiesta futhi ungathanda ukugwema sonke isiminyaminya, kukhona Ipaki futhi Ugibele eduze kwase-Coronado Mall (6600 Menaul Blvd NE).
Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nale ndawo ngizotholakala ohlelweni lokusebenza lwe-Airbnb ngawo wonke amahora, ngakho ungangabazi ukubhala nokubuza imibuzo :)